Wasiirka Kheyraadka Oo Dalka Dib Ugu Soo Laabtay Kadib Shir Uu Uga Qeybgalay Istanbul – idalenews.com
Wasiirka Kheyraadka Oo Dalka Dib Ugu Soo Laabtay Kadib Shir Uu Uga Qeybgalay Istanbul
Wasiirka Kheyraadka dalka ee xukuumda Soomaaliya ayaa fahfaahin ka bixisay waxyaabihii ka soo baxay shir looga hadlayay arimha deegaanka oo Lix iyo Labaatan dowladood ku dhexmaray magaalada Istanbuul ee dlaka Turkiga.
Mudane C/risaaq Cumar Maxmed wasiirka Kheyraadka oo maanta garoonka ka soo dagay garoonka diyaarada Aadan Cadde ayaa ka warbixiyay waxyaabihii ka soo baxay Shirkaasi.
Wasiirka ayaa sheegay in uu ka qeybgalay shir looga hadlayay dhirta oo sida uu tilmaamy Soomaliya muhiim u ah, isagoo intaa ku daray in waxyaabaha Mudnaanta u leh Soomaaliya ee ka soo baxay shirka ay ka mid tahay in dowlada Turkigu ay ka taageereyso Soomaaliya sidii dhirta dib loogu soo celin lahaa.
Sidoo kale wasiirka ayaa xusay in mudadii uu joogay Istambuul uu kulamo gaar gaar ah la yeeshay wasiiro ka socday wadamada caalamka. isagoo sheegay in uu kala hadlay arimo ku saabsan xiriirka Soomaaliya iyo wadamadaasi.
Guddi kala taliya dowlada UK arrimaha maandooriyaha oo diiday in la mamnuuco Qaadka